Maamulka degmada Jalalaqsi oo faah faahin ka bixiyay dagaal ka dhacay deegaanka Qoryaale. | Hiilnews
Home Ciyaaraha Maamulka degmada Jalalaqsi oo faah faahin ka bixiyay dagaal ka dhacay deegaanka...
Maamulka degmada Jalalaqsi oo faah faahin ka bixiyay dagaal ka dhacay deegaanka Qoryaale.
Ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badana waa ku dhaawacmeen kadib markii iska horimaad deegaanka Qoryaale oo qiyaastii 18 KM dhanka Koonfureed ka xigta degmada Jalalaqsi uu ku dhaxmaray dadka deegaanka oo is abaabulay islamarkana garab ka helaya ciidamada booliska Hirshabeelle, kuwa dowladda, maamulka degmada iyo dagaalyahanno ka tirsan ururka Al shabaab.
Afarta ruux ee ku dhimatay dagaalka ayaa kala ah hal ruux oo shacabka ah, askari ka tirsan ciidamada dowladda iyo labo ka tirsan Al shabaab sida u sheegay guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ( Dabaashe).
” Kooxda argagixisada ayaa weerar ku soo qaaday deegaanka Qoryaale oo qiyaastii 18 KM dhanka koonfureed ka xigta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, weerarkan ciidamada waa iska difaaceen, waxana looga dilay laba ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday, dhankeena hal askari iyo qof shacab ah ayaa nooga shahiiday hadda deegaanka waxaa jooga oo horeyna u joogay Ciidamada.”ayuu yiri guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof.
Mahan markii ugu horeysay oo ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka Al shabaab kula dagaalaman qeyb ka mid ah gobolka Hiiraan.
Previous articleMajaajiliiste caan ahaa oo geeriyooday
Next articleDowladda Soomaliya oo soo celisay xiriirkii kala dhexeeyay kenya